RUNTA MAA LA SHEEGO
Faisal mohamed bulhan
Waa la yaab aan la arag maanta ka hor!! waa sasabasho iyo xeelado midabyo badan, waa dareen la'aanta dadweynaha, waa qabyaaladda laga dhigtay diinta la caabudo. Waxaan uga socdaa waa dadkan iyo dalkan noqday shaxda lagu ciyaaro, ee aan la kala bedelin godadkeeda, balse ay is bedelayaan oo keliya shakhsiyaadka ciyaarayaa.
Dadkani wuxuu si is daba-jooga ah isaga dhaxlay dagaalo farabadan oo mid walba ay ku waayeen, naf iyo maal aad u fara badan, iyada oo ujeedadu ahayd in lagu gaadho nabad cadaalad dawlad ku dhisan, dub u dhis iyo dano dhaqaale oo ijtimaaci ah,
Hadaba, umaddii waxay dhaxashay dhimasho, shaqo la'aan, macaluul joogto ah, caafimaad la'aan, nabad la'aan, waxbarasho la'aan iyo darxumo fara badan oo aafeeyey gebi ahaanba dalka. Waxaa is weydiin leh markuu dagaal dhamaado waxaa la dhisaa dawlad cusub, marka dawladdii wakhtigeeda dhamaadana waxay keenta dagaal hor leh, denbigaa yaa iska leh, yaa isku keen diraa?
Denbigaas waxaa iska leh baan qabaa shakhsiyaad leh dano gaar ah iyo kursi-doon iyo weliba dhaqaale korodhsi. Waxaa cad in dadka nina aanu u danaynin ee laga danaysto, balse taa maxaa loo iftimiin waayey oo runta loo sheegi waayey. Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa raga isku sheega madaxda soomaalida oo mas'uul ka ah umadda inay gacanta ku hayaan , ayaa noqday kuwo ku fashilmay xilkii loo dhiibay , noqdayna kuwo lagu maaweeliyo Cabdow heedhee, iyo Calow heedhee,.
Siyaasiyiin uu madax- maray kursi dhiig ka sokeeyo, oo macnihiisu yahay mindi mindi ku taag, dadkiina ku dabeyl -raacay, iyada oo macnuhu yahay " Amba layma dhaamee wixii lumayay yeelkooda" Saraakiil xusuusan dhibkii adkaa ee ka soo gaadhay halgankii SNM, nasiib darose aan u bislaan si ay dadka u hanan lahaayeen, laakiin marka dagaaladu dhacaan noqda hogaamiyayaal dagaal oo aad loo aaminsan yahay qaarkood.
Waxaan leeyahay inta arrimahaasi socdaan ee aan layska qaban , qofna yaanu sugin dawlad ka taaba gasha isla markasana kaafisa dalka oo dhan. Dadkana waxaan ugu baaqayaa in ay ilaahay u noqdaan, oo fadhiga ka kacaan kitaabka ilaaahayna kor u qaadaan, kana ilbaxaan amaahiyo berraan keenayaa adhi. Caruur iyo reer guure-raac waa loo kala sheekeeyaa ismana arkaan, sidaasi waxaa ka dhigan dadka shacabka ah ee layskaga horkeennayo been xeeladka laysu duur xulayo, iyada oo loogu gabanayo marba dawlad bil sadex ah baanu dhisaynaa. Waxaa dhaca shirar badan oo nabad lagu goobaayo, hadana waxaa ka daba dhaca kuwo kale oo dagaal lagu goobaayo. Waxaan ku soo gebagebaynayaa, shir kastaa wuxuu inoo dhalaa shir gabno ah, dawlad kastaana waxay dhashaa dawlad la'aan dawlad la'aanina waxay dhashaa dal la'aan, halka dal la'aantuna ay ka dhasho dad xumaan.
QORAALADII HORE EE FAYSAL M. BULXAN